एक जुगमा एक दिन - सिसाकलम ब्लग
उपभोक्तालाई सुविधा दिने मेसोमा फेरी केयुकेलले पानि छ छ महिनामा एक पटक आउने व्यवस्था गरिदिन्छ अनि झन रमाइलो । अनि फेरी बर्षमा एक पटक आउने व्यवस्था गरिदिन्छ । फेरी चुनाव जसरी ५ वर्षमा आउने ब्यस्था गरिदिन्छ । फेरी गोदावरी मेला झैँ १२-१२ बर्षमा एक पटक पानी आउने व्यस्था हुन थाल्छ । र यो बिकाशको क्रमले अझै तिब्रता पाउदै पानि भन्ने कुरा सताव्दीमा एक फेरा आउने सम्म हुन थाल्छ र एक जुगमा एक थोपा एक चोटी आउछले सार्थकता पाउछ । त्यति बेला एक बच्चाले आफ्ना बाबुलाई धारोको भग्नाबशेस देखाउदै सोध्छ -" ड्याडी ड्याडी ! यो केहो ?" बाबुले भन्छन -" यो धारो हो बाबु पहिला पहिला काठमाडौँमा यहाँ बाट पानी आउछ भन्ने किम्बदन्ती पाइन्छ ।
by Nepali Caricature at 09:33